Iyo Federal Communications Commission (FCC)inzvimbo yakazvimirira yehurumende yeFederal yeUnited States. Yakagadzirwa muna 1934 nechiito cheCongress yeUnited States, uye inotungamirwa neCongress.
Iyo FCC inobatanidza kutaurirana kwepamba uye kwepasi rese nekudzora radio, terevhizheni, kutaurirana, satellites, uye tambo. Inovhara zvinopfuura makumi mashanu nyika, Columbia, uye matunhu muUnited States kuve nechokwadi chekuchengetedzwa kweredhiyo uye waya zvigadzirwa zvigadzirwa zvine chekuita nehupenyu nepfuma. FCC kubvumidzwa - FCC Certification - inodikanwa kune akawanda maredhiyo kunyorera, zvigadzirwa zvekutaurirana, uye zvigadzirwa zvemadhijitari kupinda mumusika weUS.
1. Chirevo Chekuenderana:Bato rinoona nezvechigadzirwa (mugadziri kana mutengesi) richaedza chigadzirwa kunzvimbo inokwanisa yekuyedza yakasarudzwa neFCC uye voita gwaro rekuyedza. Kana chigadzirwa chacho chikasangana nemitemo yeCCC, chigadzirwa chinonyorwa saizvozvo, uye bhuku rekushandisa rinotaura kuti chigadzirwa chinosangana nemitemo yeFCC, uye gwaro rekuyedza richachengetwa kuti FCC ikumbire.
2. Nyorera ID.Kutanga, nyorera iyo FRN yekuzadza mamwe mafomu. Kana iwe uchikumbira iyo FCC ID kekutanga, iwe unozofanirwa kunyorera yekusingaperi GRANTEE CODE. Ndichakamirira mvumo yeCCC yekugovera iyo Grantee Code kuMunyoreri, Iye Munyoreri anokurumidza kuita kuti Midziyo iedzwe. Iyo FCC ichave yabvumidza iyo Grantee Code panguva iyo yose FCC yaida kuendesa kunge yagadzirirwa uye iyo Test Report yapera. Vanyoreri vanozadza FCC Mafomu 731 uye 159 online vachishandisa iyi Kodhi, bvunzo mushumo, uye zvinodiwa zvinhu. Pakugamuchira Fomu 159 uye mari yaunotumirwa, iyo FCC ichatanga kugadzirisa zvikumbiro zvechitupa. Ivhareji yenguva iyo FCC inotora kugadzirisa chikumbiro cheID ID mazuva makumi matanhatu. Pakupera kwemaitiro, iyo FCC ichatumira iye anenge achinyorera iyo Yekutanga Grant neiyo FCC ID. Mushure mekunge munyoreri awana chitupa, anogona kutengesa kana kutengesa zvigadzirwa zvacho.
Iyo FCC inowanzo gadza zvikwereti zvakaomarara pane zvigadzirwa zvinotyora mitemo. Kuomarara kwechirango kunowanzo kwana kuita kuti mutadzi abhuruke uye atadze kupora. Saka vanhu vashoma kwazvo vanozo kutyora mutemo vachiziva. FCC inoranga vatengesi vezvigadzirwa zvisiri pamutemo nenzira dzinotevera:
1. Zvese zvigadzirwa zvisingasvitse zvakatemwa zvichatorwa;
2. Kubhadharisa faindi yemazana nemazana maviri ezviuru zvemadhora pamunhu wega wega kana sangano;
3. Chirango chakapetwa ruviri mari yekutengesa yezvinhu zvisina kukwana zvigadzirwa;
4. Chirango chezuva nezuva chekutyora kwega kwega chiuru chemadhora.